Tuesday February 23, 2021 - 09:47:22 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Cabdullaahi Maxamed Cumar
Ku: Muwaadin Kasta oo Damqasho Diineed iyo tu Dhaqan Leh
Ku: Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland
Ku: Madax Dhaqameedka Somaliland
Ku: Guddiga Wanaag Faridda iyo Xumaan Reebidda
Ku: Dhammaanba Culimada Reer Somaliland
Marka aad salaanta Islaamka ee qaaliga ah guddoontaan kaddib, waxan aad iyo aad uga xanuunsaday/xanuunsadaa mar kasta oo aan arkana dhulku ila wareegaa; fal aad u xun oo dalkeenna laga caadeystay oo beryan dambana faraha ka sii baxaya -gaar ahaanna xilligan lagu jiro ololaha doorashooyinka is-ku-sidkan.
Falkaasi oo dadnimada iyo diintaba ku xumi, waa Fulka ama qoolka ubaxa ah ee ay haweenka iyo gabdhaha yaryari qoorta u galiyaan ragga murashaxiinta ah iyo weliba ragga madaxda ah ama mudanta kalaba!
Mudanayaal, idinka oo sharaf leh, arrintaa aan soo tilmaamay oo xishood la'aan ah, isla markaasina shuqul gaalaad ah; waxa loo baahan yahay, in si degdeg ah looga hawlgalo oo loo joojiyo.
Ujeedada aan warkan idiinku soo gudbiyeyna ma aha, in fulka ama qool ubaxeedka la mamnuuco ama joojiyaba, wa Ujeeddo: Wax-ka-qabashoUjeeddo: Wax-ka-qabashoxanse ujeedaa, in la joojiyo hab dhaqankan haweenku ragga caasha saarayaan marka ay ubaxa u gelinayaan!
Maxaa diidaya, in wiilashu ragga ubaxa u galiyey? Gabdhuhuna dumarka u sudhaan ubaxa qoorta?Miyaanse ragga gacanta loogu dhiibi karin, inta haweenku luqunta u sudhayaan!??
Runtii, waa arrin aad u foolxun oo qiiro la'aan ah; sii eegashadeeduna waa Islaanimo iyo edeb la'aan!
Sidaa awgeed, waxan si xurmo iyo xishmadba leh idiinka codsanayaa; in si degdeg ah oo aan loo ka-la-hadhin wax looga qabto arrintaasi.
Ubaxaa la sido
Edebtaa la nacay
Islaamka la diley
Oday aan xishoon??
Wa Billaahi At-towfiiq